Ankizy ho an'i Kidz - Banky Sakafo any Galveston County
Mivoaka ny mosary
Ampidino ny fonosana Food Drive
Ahoana no tsy itovizan'ny fihinana sakafo Kids for Kidz noho ny mpamily sakafo ankapobeny?
Kids for Kidz sakafo drive dia manampy amin'ny fanomezana hery ny ankizy amin'ny sokajin-taona rehetra mba hanampiana ny ankizy hafa ao amin'ny fiaraha-monina misy azy. Raha ampitahaina amin'ny fihinanam-be amin'ny sakafo dia mangataka zavatra manokana sakaiza ho an'ny ankizy izahay hanangonana mba hanohanana ny programa fisakafoanana Kidz Pacz fahavaratra.
Ny entana fanomezana sakafo amin'izao fotoana izao ho an'ny 2021 dia Kaopy mikaroba Mac & Cheese. (misy marika)
Iza no afaka mandray anjara amin'ny fihazakazahana sakafo Kids for Kidz?
Ny ankizy rehetra izay tafiditra ao amin'ny kilasy sekoly, klioba, vondrona na fikambanana dia afaka mandray anjara amin'ny fizahana sakafo Kids for Kidz.
Ahoana no fomba hahazoan'ny mpianatra ora an-tsitrapo?
Ireo mpianatra mila ora an-tsitrapo ho an'ny sekoliny, ny vondrona, ny kliobany na ny fikambanany dia afaka mahazo ora fanompoana an-tsitrapo amin'ny fanomezana.
Kitapo Mac & Cheese 4-fonosana efatra = asa fanompoana an-tsitrapo 1 ora
16 kaopy Mac & Cheese tsirairay = tolotra an-tsitrapo an-tsitrapo 1 ora
Tsy ho an'ny tribonaly nandidy asa fanompoana an-tsitrapo.
Ahoana no fomba fisoratako anarana handray anjara amin'ny fizahana sakafo Kids for Kidz?
Azonao atao ny misoratra anarana handray anjara amin'ny famenoana ny fisoratana anarana ao amin'ny Ankizy ho an'ny Kitapo Sakafo Sakafo Kidz.
Aiza no hitondrako ny fanomezana ataoko?
Ny fanomezana dia ekena ao amin'ny GCFB Admin Building, 213 6th St N, Texas City 77590 (eo am-piandrasana ny fiantsonan'ny fiara no mijanona eo am-piantsonana faha-3 Ave N), Alatsinainy - Zoma 8 maraina ka hatramin'ny 3 hariva. Azafady miantso alohan'ny fandefasana hampandre ny mpiasa.